China Bypass oil filter, Precision filter element manufacturers, oil filter machine suppliers - Shenzhen Wonpro Technology
Oil Filter ကိုရှောင်ပါ။
တိကျသော Filter Element
Water Glycol ဆီစစ်ထုတ်သည့်ဒြပ်စင်
ဘာကြောင့် US ကို ရွေးချယ်ပါသလဲ ။
ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များကို သုံးစွဲသူများ ဘက်စုံနားလည်နိုင်စေရန်အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အင်ဂျင်နီယာများသည် မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆက်သွယ်လာကြသည်။
ဖောက်သည်များအတွက် သင့်လျော်သော ထုတ်ကုန်ဖြေရှင်းနည်းများကို ပြုစုပျိုးထောင်ပြီး ဖောက်သည်များအား သက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းများပေးခြင်း၊
စားသုံးနိုင်သော ကာလ၊ တစ်သက်တာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှလွဲ၍ အခြားထုတ်ကုန်များအတွက် 12 လ အာမခံပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Professional BU-100-104 Bypass Oil Filter သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ အလားတူထုတ်ကုန်များ၏ စျေးကွက်ဝေစုသည် ဝေးကွာနေပါသည်။ BU-100-104 ရှောင်ကွင်းဆီစစ်ဇကာသည် မြင့်မားသောစစ်ထုတ်မှုတိကျမှုနှင့် ကြီးမားသောအညစ်အကြေးများကို ထိန်းထားနိုင်မှုနှင့်အတူ မိုက်ခရိုနအဆင့်ညစ်ညမ်းမှုများကို စစ်ထုတ်နိုင်သည်။
လက်ကားရောင်းချသော BU-50-114 ရှောင်ကွင်းဆီစစ်ထုတ်စက်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် နှစ်စဉ်ရောင်းအား ယူနစ် 20,000 ကျော်ရှိသည်။ BU-50-114 ရှောင်ကွင်းဆီစစ်ထုတ်သည် မြင့်မားသောစစ်ထုတ်မှုတိကျမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် မိုက်ခရိုနအဆင့်ညစ်ညမ်းမှုများကို စစ်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် BU-50-104 ရှောင်ကွင်းဆီစစ်ထုတ်သည့် ထုတ်လုပ်သူများ၊ တရုတ်နိုင်ငံရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ အလားတူထုတ်ကုန်များ၏ စျေးကွက်ဝေစုသည် ရှေ့တွင်ရှိနေပါသည်။ BU-50-104 bypass oil filter သည် မြင့်မားသော filtering တိကျမှု၊ တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းနှင့် ကျယ်ပြန့်သော application range ဖြင့် micron အဆင့်ညစ်ညမ်းမှုကို စစ်ထုတ်နိုင်သည်။
China Advanced BU-32 Bypass Oil Filter ထုတ်လုပ်သူများ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် နှစ်စဉ် အရောင်းအ၀ယ်ပမာဏ 30,000 ကျော်ရှိသည်။ BU-32 ရှောင်ကွင်းဆီစစ်ထုတ်စက်သည် မြင့်မားသောစစ်ထုတ်မှုတိကျမှုနှင့် တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့် မိုက်ခရိုနအဆင့်ညစ်ညမ်းမှုကို စစ်ထုတ်နိုင်သည်။
Bypass oil filter၊ Precision filter element၊ oil filter machine or price list အကြောင်း စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက သင့်အီးမေးလ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ထားခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ 24 နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
Ningbo Water Glycol ရေနံသန့်စင်စက်၏သတ်မှတ်ချက်များ
â€‹Ningbo Water Glycol ရေနံသန့်စင်မှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ- Matt Filtration၊ Twelve Coalescing Dewatering Oil Purifier Main Components Configuration Table 11 Coalescing Dewatering Oil Purifier Outline Dimensions*** အလယ်အလတ် viscosity မြင့်မားလွန်းသောအခါ သို့မဟုတ် ဆီအပူချိန်နိမ့်သောအခါ၊ တစ်ခုထည့်ရန် လိုအပ်သည် အပူပေးကိရိယာ **** ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော မော်ဒယ်သည် F ၏နောက်တွင်၊ ပုံမှန် အမျိုးအစား * စစ်ထုတ်မှု တိကျမှုကို ချန်လှပ်ထားကာ 03 ဒဏ်ငွေ filter သည်3microns ** အသုံးပြုနိုင်သော အလတ်စား၊ အထွေထွေ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ၊ BH ရေ-glycol၊ V Phosphate ဟိုက်ဒရောလစ် ဖိအားကို ချန်လှပ်ထားသည်။
ဆီစစ်သောဒြပ်စင်သည် ဆီစစ်ထုတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ oil filter ကို oil grid လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ Full-flow နှင့် split-flow အမျိုးအစားများရှိသည်။
ဆီနှင့် ဆီစစ်ကို ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် ဘာတွေသတိထားရမလဲ။
ဆီနှင့် ဆီစစ်ကို အစားထိုးခြင်းအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ- 1. အင်ဂျင်၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တာရှည်ခံစေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေသော ဆီနှင့် ဆီစစ်ကာများကို တစ်ချိန်တည်းတွင် အစားထိုးသင့်သည်။
Goldfields E-business Incubator၊ Tenglong လမ်း၊ Longsheng အသိုက်အဝန်း၊ Longhua မြို့၊ ရှန်ကျန်း၊ တရုတ်
မူပိုင်ခွင့် © 2021 Shenzhen Wonpro Technology Co.,Ltd. - Bypass Oil Filter - All Rights Reserved.